November 2, 2021 - Babal Khabar
Nov22021 by बबाल खबरNo Comments
१३ करोड मूल्यको ‘आई लभ यू’ ! आई लव यु भनेको सुन्नको लागि १३ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्छ
पहिले यो तलको भिडियो हेर्नुस, माया अनमोल हुन्छ, तर आई लव यु भनेको सुन्नको लागि १३ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । वास्तवमा सिंगापुरको का सी ला वी रेष्टुरेन्ट विश्वको नै महंगो डेटिङ रेष्टुरेन्ट हो । त्यहाँ आफ्नो पार्टनर लैजान २० लाख डलर वा करीब १३ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । यति रकममा त्यो रेष्टुरेन्टमा ८ घन्टा मात्र बस्न सकिन्छ ।यो सिंगापुरको सी ला वी र वल्ड अफ डाउमण्ड ग्रुपले बनाएको हो । १५ वर्षदेखि यसले दुनियाकै मानिसहरुलार्ए सेवा दिइरहेको छ । त्यहाँ जोडीहरुले फरक–फरक तरीकाले आफ्नो पार्टनरलाई आई लव यु भन्ने गर्छन् । त्यहाँको माहौल धेरै रोमाण्टिक बनाइएको छ ताकी तपाइँ हरेक समय फिल गर्न सक्नुहुनेछ । रेष्टुरेन्टमा प्रेम प्रस्ताव गर्नको लागि पर्खनु पर्छ तपाइँलाई एक प्लेटमा सजाएर आइसक्रिम र चम्चा दिन्छन् । प्लेटमा आइसक्रिमको साथै पाटनरलाई लगाइ दिनलाई हिराको औठी पनि दिने चलन छ । यो पनि
मानिसहरू किन नङ टोक्छन् ? यस्तो छ लुकेको रहस्य !
यो तलको भिडियो हेर्नुस, संसारमा लगभग ६० करोड मानिस नङ टोक्ने गर्छन् । मनो वैज्ञानिक'हरूका अनुसार, मानिसहरू चिन्तित वा बोर हुँदा अ'नायासै नङलाई दाँतमुनि पार्छन् । यो एक प्रवृत्ति मात्र हो । नङ चपाउनु गलत भएको भनी बच्चाहरूलाई बताउँदा पनि केहीले छोड्दैनन् र पछि ठूलो हुँदासम्म चपाउने बानी बस्छ ।नङ चपाउनुले मानसिक तनाव र अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिस अर्डरको संकेत दिन्छ । मनोवैज्ञानिकहरूले नङ टोक्नु गम्भी'र बि'रामीको सं'केत भएको बताएका छन् । अनि टोक्दा नङको मूल आकार पनि बिग्रन्छ । खासमा नङ चपाउनु व्यक्तित्वको अस्थि'रताको संकेत हो । कुनै जटिल समस्याको समाधान निकाल्न नसक्दा मानिसहरू रनभुल्लमा परेर नङ चपाउँछन् । यसो गरेर उनीहरू आफ्नो रिस उतार्छन् । नङ चपाउने मानिसहरू अ'तिवादको शि'कार हुन्छन् । अत्यधिक महत्त्वाकांक्षा भएका वा आफूलाई बेकामे ठान्ने मानिसले नङ चपाउँछन् । तर ९० प्रतिशत नङ चप
बिरालोसँग विवाह गर्ने यी महिला
यो भिडियो हेर्नुस, आजसम्म हामीले मानिसबीच विवाह भएको सुनिएको र देखिएको छ । तर, आज हामी एक महिलाले बिरालोसँग दुईपटक विवाह गरेको बारेमा जानकारी दिनेछौ । स्पेनमा बस्ने ४८ वर्षकी बारबेरेला बुचनरले आफ्नो विवाहको १० औं वर्षगाँठ मनाएकी छन् । उनले यो वर्षगांँठ मानिससँग नभएर दुई बिरालोसँग मनाएकी हुन् । वास्तवमा ती महिला पछिल्लो १४ वर्षदेखि आफ्ना बिरालाहरु स्पाइडर र लुगोसीसँग वैवाहिक सम्बन्धमा छिन् । २००४ मा बारबेरेलाले दूई बिरालोसँग विवाह गरेकी थिइन् । त्यो समयदेखि आजसम्म आनन्दले जीवन बिताएकी छिन् । बिरालालाई नै आफ्ना पति स्वीकार गरेर बसेकी छिन् । उनले जिन्दगीको लामो समय मानिसमा माया खोज्नमा बिताएकी थिइन् । पछि मानिससँग माया खोज्नु र गर्नु बेकार सम्झेर बिरालोसँग विवाह गरेको बताउँछिन् । उनको अनुसार बिरालोलाई जति माया गर्दा खुशी अरुबाट पाइदैन । उनले बिरालोहरुलाई एक पत्नीले गरेको जस्
श्रीमान् सुतिरहेका थिए, श्रीमतीले यस्तो गरिदिइन ! श्रीमान भय भाइरल
हेर्नुस यो भिडियो, सोसल मिडियामा एक श्रीमानका तस्बिर भाइरल भइरहेका छन् । ती व्यक्ति निदाइरहेका थिए । तर उनले महिलाको पहिरन लगाइरहेका थिए । साँच्चै भन्ने हो भने ती पहिरन उनीमाथि बि'छ्याइएका थिए जुन उनले लगाएको झैं देखिन्थ्यो । यस्तो क्रि'याकलाप ती व्यक्तिकी श्रीमतीको हो जसले फिलिपिन्समा एक अनलाइन बुटि'क चलाउँछिन् । उनले आफ्ना सु'तिरहेका श्रीमानलाई मोडलको रुपमा प्रस्तुत गरि'दिइन् । यस्तो उनले अनलाइन कपडा बेच्नका लागि गरिन् । यी तस्बिर व्य’क इलष्लिभ क्जयउउभ नामको फेसबुक पेजले सेयर गरेको हो । यसमा क्याप्सनमा लेखिएको छ, ‘म्यानेक्विन छैन रु समस्या छैन । कोसिस चाहिन्छ ।’ खबर लेख्ने बेलासम्म यो पोस्टमा लगभग ६ हजारले कमेन्ट गरिसकेका छन् भने ११ हजारले रियाक्सन दिइसकेका छन् । यसका साथै यो पोस्टलाई २२ हजारले सेयर गरिसकेका छन् । धेरैजसोले महिलाको क्रिएटिभ आइडियाको तारिफ गरिरहेका छन् ।